Ihe na-eme ka Semalt na-ekwurịta ozi gbasara aka maka ịghọ aghụghọ n'Ịntanet na ụzọ nke ichebe onwe gị megide ya.
Mbupu (ebu) ụlọ ọrụ maara nke ndị fraudsters na-eji njirimara ha na mmadụmgbasa ozi na e-azụmahịa na ebe nrụọrụ weebụ iji duhie ọtụtụ puku shoppers ndị na-akụ ndị a na ebe nrụọrụ weebụ.
Nke a bụ otú ha si arụ ọrụ. Ị na-agafe na ebe nrụọrụ weebụ e-commerce, chọpụtaihe ọ bụla ịchọrọ ịzụta, lelee ma mezue usoro ịkwụ ụgwọ. Mgbe ahụ, ị ​​ga-enwetakwa ozi-e na-arịọ gị ka ị kwụọ ụgwọ maka mbupu yaa zitere ya. E nwere ihe ọ bụla na-ejide azụ: ozi ahụ esiteghi na ụlọ ọrụ ndị ọrụ nchịkwa, ego a na-arịọ gị ka ị kwụọ ụgwọ ga-a gaghị akwụghachi ya ma ọ gaghịkwa enye aka ịhazi usoro gị - curso de fotografia digital en español. Ntuchi ndị ọzọ dị ka mgbagwoju anya lotiri, ebe a gwara gị na ị meriri ihe dị elu,ịgba chaa chaa ma ọ bụ ihe nrite maka asọmpi ị na-etinyeghị na mbụ.
Ụlọ ọrụ ndị na-ebugharị anaghị enye ọrụ ndị ọzọ (escrow). Dị ka ndị dị otú ahụ, anaghị adịna-atọ ụtọ na ị na-ekwu maka ịkwụ ụgwọ ịgba ụgwọ maka ịgbanye onye ọ bụla. Ị nwere ike ịbanye n'ime ojoro weebụ.
Ross Barber, nke Ọkachamara Onye Nlekọta Ọrụ Ndị Ahịa, na-adụ gị ọdụ ka ị tụlee ozi ndị na-esonụ. Ọbụna ma ọ bụrụ na e nwere nọmba ntinye e kenyere naMbupu, ekwela ka a ghọgbuo gị. Ngwa a nwere ike itinye na ngwaahịa ịzụ ahịa gị, ma ọ nwere ike ọ gaghị adị n'aka akaụlọ ọrụ. Ọ bụrụ na ị nwere obi abụọ ọ bụla, kpọtụrụ ụlọ ọrụ mbubata ma ọ bụ gaa na ebe nrụọrụ weebụ ha. Nke a ga-achọpụta na ụlọ ọrụ mbupunwere ngwaahịa ya..Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike izu ike na nkasi obi na ngwongwo gị ga-abịakwute gị.
Ndị na-ebu ibu na ndị na-ebu ibu na-eme ihe niile ha nwere ike iji gbochie ntanetị.Ọrụ ndị ahịa ha, ngalaba iwu na nchebe na-arụkọ ọrụ ọnụ iji jide n'aka na ị (onye ahịa) maara ihe niile na-akpata ma ọ bụzere ha. Ọzọkwa, ha na-akwado òtù dị iche iche nke mba dị ka eBay, Amazon, Western Union na ọbụna gọọmenti ka ha na-edebeihe na-agba ọsọ.
Gịnị ka ị ga - eme ma ọ bụrụ na ị bụ onye aja?
Ka ndị ọchịchị dị mkpa wee mechie ebe nrụọrụ weebụ ụgha, hakwadoro gị ka ị kọọ akụkọ ọ bụla. Nyefee email ahụ na adresi nyere. Rịba ama na ị gaghị enweta ọkwa mgbe ịzipu ozi-e. O nwekwara ike ịbụ ezigbo echiche ịkọsara ndị uwe ojii mpaghara ebe a, ndị uweojii. E nwere okwu ole na ole, nkeakpatawo njide. Site na ndị ọjọọ ụmụ okorobịa na-anọchi ụlọ mkpọrọ, ị nwere ike ịnụ ụtọ mma nke ịzụ ahịa n'ịntanetị.
Dị ka ekwuru, ọ dị mkpa ịkọ akụkọ niile nke ịgbagwoju anya n'ịntanetị karịsịandị banyere ụlọ ọrụ mbupu. N'ebe ọha na eze maara banyere egwu a, ihe ndị a ga-abụ ihe n'oge gara aga. Leeụfọdụ usoro iji gbochie ịghọ aghụghọ n'Ịntanet:
> nzukọ n'etiti ndị dị iche iche na-achọ ka ha dozie okwu a
> na-ebipụta akwụkwọ akụkọ mgbe niile
> ụkpụrụ nduzi banyere otu esi ebufe maka ọrụ ịba uru. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ikena-ekwu ngwa ngwa banyere ojoro.
N'ikpeazụ, jide n'aka na ị ga-agwa enyi gị ihe ị na-amụta ka ha onwe ha kwa meeghara ịghọ onye aja.